May 16, 2021 - ApannPyay Media
May 16, 2021 by ApannPyay Media
သောက်ရေသန့်တွေကို ရေနွေးကျိုချက်သောက်ရင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်လား……..? အခုတစ်လော Facebook လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ သောက်ရေသန့်ကို ရေနွေးကျိုချက်ရာမှာသုံးသော၊ထမင်းဟင်းချက်ရာမှာသုံးသော သူတွေကို ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ ပိုစ့်တစ်ခု အကြောင်း လက်လှမ်းမှီသလောက်လေး ရှင်းပြပါရစေ။ အဆိုပါ ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ သောက်ရေသန့်တွေကို အပူပေးလိုက်တဲ့အခါ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပို့စ်မှာ ပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဦးစွာပြောပြရလျှင် – ” ရေသန့်ကို ရေနွေးကျိုသောက်တာ မဟုတ်ပဲ နေပူထဲချထားရင်တောင်ကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ ရေသန့်ဖြစ်ဖို့ကလိုရင်းဆေးခပ်ရပါတယ်။ ရေသန့်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ကလိုရင်းဓာတ်က အပူနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါ ကလိုရိုဖောင်းဓာတ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ကြာရှည်အပူပေးသုံးစွဲလာတဲ့အခါ မအီမသာဖြစ်ခြင်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း ပျို့အန်ခြင်း အမည်မဖော်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်လာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကင်ဆာဘက်ကိုနွယ်လာနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ pH 7ကို ထပ်ပြီးသန့်စင်လျှင် Alkali ရေသန့်ဖြစ်သွားမယ်၊ Alkali ရေသန့်က ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်၊Alkaline အထိလည်း ထပ်ပြောင်းလဲလို့ ရတယ်။ … Read more
အနာတွေ မပေါက်သေးပဲ မန်းတွေ ခဲနေရင် ဒီအပင်ကို သတိရပါ
အနာတွေ မပေါက်သေးပဲ မန်းတွေ ခဲနေရင် ဒီအပင်ကို သတိရပါ မန်းသုံးခွ အရွက်ကြောင်း သိကောင်းစရာ မေ ဒီနေ့ တော့ ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ Opt တွေတွက်သတင်းကောင်းတခုဖစ်တဲ့ မန်းသုံးခွရွက် အသုံးဝင်ပုံလေးပြောပြပါမယ် ရှင် သိတဲ့ လူလဲ ရှိမယ် မသိတဲ့သူလဲရှိမယ် ဒီအရွက် လေးကနေရာ ဒေသမရွေးပေါက်ပါတယ်ရှင် သူကတော့ အနာတွေ မပေါက်သေးရင် မန်းတွေ ခဲနေရင် အုံပေးပါ နောက်ပိီး အရိုးကျိုး အရိုးအက်နေတာဆွေ ဓါတ်မှန်မလို ခွဲစိတ်ဖို့မလိုပဲ သူ့အရွက်ထုပြားအုံစည်းပေးပါ။ တကယ် လက်တွေ့ မေ တို့ကုနည်းပါရှင် ဆေးရုံကလက်ရှော့ ပြန်လွတ်တဲ့ လူနာ Opt ပြန်ကောင်းသွားအောင် အစွမ်းထက်တဲ့ သဘာဝ ဆေးအင်လေးပါရှင် အကြော ၊အရိုးအတွက်အထူးကောင်းမွန်ပါတယ် မိမိပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ လို ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ … Read more
အသားအရေကို အမြဲနုပျိုစေမယ့် သဘာဝပစ္စည်းများ
အသားအရေကို အမြဲနုပျိုစေမယ့် သဘာဝပစ္စည်းများ သင့်အသားအရေကို photoshop နဲ့ ပြင်တာထက် ပိုပြီး နုပျိုလှပအောင် လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်အသားအရေကို သဘာဝ အသီးအနှံတွေသုံးပြီး အမြဲနုပျိုအောင် လုပ်လို့ ရပါတယ် …. ခရမ်းချဉ်သီး ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ အသားအရေကို ခရမ်းချဉ်စီးနဲ့ ပြုပြင်လို့ ရပါတယ် ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ပါးပါးလေးဖြစ်အောင် အကွင်းလိုက်လေး လှီးပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ မိနစ် 20 ကြာကပ်ပေးထားရမှာပါ ။ တစ်ပတ်တစ်ခါ လုပ်မယ်ဆိုရက် အသားအရေက ရေဓာတ်ပြည့်လာပြီး ပြန်လည် နုပျိုလာမှာပါ…. မျက်နှာယောင်နေတယ်ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးကို အရည်ညှစ်ပြီး မျက်နှာပေါ် ပွတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ အသားအရေ ညီညာဖို့ဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ်နဲ့ သံလွင်ဆီကို မျက်နှာပေါ်နှံ့အောင် လိမ်းပေးရမှာပါ…. အာလူး အာလူးက အသားအရေ … Read more
အိမ်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိရင် သိထားသင့်သော နမိတ်များ ..
အိမ်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိရင် သိထားသင့်သော နမိတ်များ .. ၁။ သမီးရည်းစား လင်မယား နှစ်ယောက် တွဲလျှောက်‌ေနတဲ့ကြား ခွေးဖြတ်၀င်ရင် အဲ့ အတွဲ မကြာခင် ရန်ထသတ်တတ်ပါတယ်။ ၂။ မိန်းကလေးတွေ ခြေထောက်ကြား ခွေးဖြတ်တိုးရင် သူ့ကို မကြာခင် အဖေ ဆူမလား၊ လင် ရိုက်မလား တစ်ခုခုပါပဲ။ ၃။ မွေးစကလေးကို ခွေး လျှာနဲ့ လျှက်သွားရင် အဲ့ကလေး ဆေးစွမ်းပါတယ်။ (နေမကောင်းရင် သူ့ ဆေးတိုက်ခိုင်းပါ။) ၄။ ပျောက်ခဲတဲ့ အနာကို ခွေး လျှာနဲ့ လာလျှက်ပေးရင်း ဆေးကုပေးတာပါ။ မကြာခင် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ၅။ အိမ်လာတဲ့ ဧည့်သည် ခွေး မျက်ခြေပြတ်မခံ ရန်စောင်နေရင် အဲ့ ဧည့်သည် အကြံဆိုးကြီးနဲ့ လာလို့ပါ။ သတိထားပါ။ … Read more
လူ ၁၀၀ မှာ ၉၉ ဦး မှားကြတဲ့ ဖုန်းအားသွင်းနည်း အလွဲများ စာဖတ် သူတွေထဲမှာ နေ့စဉ်ဖုန်းမသုံး တဲ့သူမရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဖုန်း သုံးကြတဲ့အခါ တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်မက ဖုန်းအားသွင်း တတ်ကြ ပါတယ်။ဖုန်းအားသွင်း တာနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတိုင်းလိုလို လုပ်တတ်ကြတဲ့ အမှားအ ယွင်းလေတွေကို သတိထားဆင်ခြ င်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးချင် ပါတယ် ။ ဖုန်းအား သွင်းကြိုးကို ပလပ်ပေါက်မှာ အမြဲတပ်ထားခြင်းက အခန်းတွင်းစို ထိုင်းဆနဲ ့ဓာတ်ပြုပြီး မီးလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေ နိုင်လို့ ဖုန်းအား သွင်းပြီးတိုင်း အားသွင်းကြိုး ကိုဖြုတ်ထားပါ ။ ဖုန်းအားကို ၁၀၀ ပြည့်တဲ့အထိ သွင်းထားတာက အားကုန်ဖို့ပို လွယ်စေတာကြောင့် ဖုန်းအား သွင်းတဲ့အခါ ၉၈ လောက်ဖြစ်ရင် ဖြုတ်ထား လိုက်ပါ။ဖုန်းအားကုန်ပြီး … Read more
သန်းပျောက်စေသော လက်တွေ့နည်းလေး ဦးခေါင်းမှသန်းများရှိခြင်း အတွက် တောကြက်ဟင်းခါးအစေ့ခြောက်ကိုအမှုန့်ပြုပြီးအုန်းဆီနှင့် ဆံပင်များကြား နှံ့နှံ့သေခြာဖိပွတ်၍လူးပေးပါ ။ ညနေလူးညသိပ်နောက်တနေ့မနက်ခေါင်းလျှော်ပေးပါ ဦးခေါင်းသန်းများ ကင်းရှင်းစေလိမ့်မည် ။ ( အထက်ပါအတိုင်း တောကြက်ဟင်းခါးအရင့်အစေ့ခြောက် အဆင်မပြေလျှင် ” တမာသီး၏အစေ့ခြောက်အမှုန့်ဖြင့်ပြုပါပေးပါ ) လက်တွေ့ဦးခေါင်းသန်း ပျောက်ကင်းစေသောနည်းပါ ။ ဆေးနည်းပေးသော တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီး အဘဦးတင်ထွေးအားဦးခိုက်ပါသည် ။ စိုင်းမင်းသန့် သန္းေပ်ာက္ေစေသာ လက္ေတြ႕နည္းေလး ဦးေခါင္းမွသန္းမ်ားရွိျခင္း အတြက္ ေတာၾကက္ဟင္းခါးအေစ့ေျခာက္ကိုအမႈန႔္ျပဳၿပီးအုန္းဆီႏွင့္ ဆံပင္မ်ားၾကား ႏွံ့ႏွံ့ေသျခာဖိပြတ္၍လူးေပးပါ ။ ညေနလူးညသိပ္ေနာက္တေန႔မနက္ေခါင္းေလၽွာ္ေပးပါ ဦးေခါင္းသန္းမ်ား ကင္းရွင္းေစလိမ့္မည္ ။ ( အထက္ပါအတိုင္း ေတာၾကက္ဟင္းခါးအရင့္အေစ့ေျခာက္ အဆင္မေျပလၽွင္ ” တမာသီး၏အေစ့ေျခာက္အမႈန႔္ျဖင့္ျပဳပါေပးပါ ) လက္ေတြ႕ဦးေခါင္းသန္း ေပ်ာက္ကင္းေစေသာနည္းပါ ။ ေဆးနည္းေပးေသာ တိုင္းရင္းေဆးဆရာႀကီး အဘဦးတင္ေထြးအားဦးခိုက္ပါသည္ ။ စိုင္းမင္းသန႔္
အပျိုပဲဖြစ်ဖြစ် အအိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါ ကျွန်မရဲ့ အမျိုးသားက ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ရာထူးခပ်ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၊ သူဟာ အမြဲတမ်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့နိုင်ငံခြားကို မကြာခဏသွားလေ့ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ နေ့တော်တော်များများမှာလည်း ညတိုင်းလိုလို ဧည့်ခံပွဲတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အိမ်တောင်ကျခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်လောက်မှာ ကျွန်မတို့မှာ သားလေးတစ်ယောက် ရလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားရဲ့ အလုပ်က အိမ်ထောင်ကျခါစထက် ပိုများလာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း အလုပ်အသစ်တစ်ခု ပြောင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက် အရင်ထက် အလုပ်ပိုရှုပ်လာပြီး မနက်တိုင်း ၇နာရီခွဲ အရောက် သွားရပါတယ်။ မိခင် လက်သစ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ခုမှ ရလာတဲ့ သားဦးကို ဘယ်လို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာ မသိခဲ့ပါဘူး။ ညဉ့်နက်နို့ဆာလို့ ထအော်လို့ ထထ တိုက်ရတာရယ် ၊ မနက်မိုးလင်း သားလေးရူးရူးပေါက်ချလို့ သေးဝတ်ထလဲရတာရယ်၊ … Read more
ယင် မလာအောင်ပြုလုပ်နည်း ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှကုန်စရာမလိုဘဲ ယင် မလာအောင်ပြုလုပ်နည်း အကုန်အကျမရှိပဲယင်မလာအောင်လုပ်နည်း သင်နေတဲ့နေရာမှာ ယင်ကောင်တွေ အရမ်းပေါနေလား စားသောက်ဆိုင်တွေ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေ ထမင်းဝိုင်းတွေမှာ ယင်ကောင်တွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ဆိုရင် အော်ဂလီဆန်စရာပါ။ ယင်ကောင်ဟာ ရောဂါပိုးတွေ အများကြီး သယ်ဆောင်လာလို့ယင်နားစာကို မစားဖို့သတိပေးတယ် မဟုတ်ပါလား။ ယင်မလာအောင်လည်းလုပ်ချင်တယ်ပိုက်ဆံကလည်းမကုန်ချင်ကြဘူးမလား ဒါကြောင့် ယင်ကောင်မလာစေချင်ရင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဇီးဖြူခက်ကလေးတွေကို ထမင်းဝိုင်းမှာ ချထားလိုက်ရုံပါပဲ။ စားရတဲ့ဇီးဖြူသီးသီးတဲ့ အပင်က အခက်ကလေးတွေပါကြာလေ ပိုအစွမ်းထက်လေဆိုပဲ မေမြို့က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တွေ့ခဲ့တဲ့ နည်းလေးပါ။ တကယ် ယင်မလာတော့ပါ လက်တွေ့ပါ..ကဲ လုပ်ကြည့်လိုက်ကြစို့။ ယင္ မလာေအာင္ျပဳလုပ္နည္း ပိုက္ဆံတစ္က်ပ္မွကုန္စရာမလိုဘဲ ယင္ မလာေအာင္ျပဳလုပ္နည္း အကုန္အက်မရွိပဲယင္မလာေအာင္လုပ္နည္း သင္ေနတဲ့ေနရာမွာ ယင္ေကာင္ေတြ အရမ္းေပါေနလား စားေသာက္ဆိုင္ေတြ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြ ထမင္းဝိုင္းေတြမွာ ယင္ေကာင္ေတြ တ႐ုန္း႐ုန္းနဲ႔ဆိုရင္ ေအာ္ဂလီဆန္စရာပါ။ … Read more
အချိန် ၂ ပတ်အတွင်း လေဖြတ်ထားသူပင် လမ်းပြန်လျှောက်စေနိုင်တဲ့ ဆေးနည်း
အချိန် ၂ ပတ်အတွင်း လေဖြတ်ထားသူပင် လမ်းပြန်လျှောက်စေနိုင်တဲ့ ဆေးနည်း ချိန် ၂ ပတ်အတွင်း လေဖြတ်ထားသူပင် လမ်းပြန်လျှောက်စေနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်း အိမ်မှာ လေဖြန်းထားတဲ့ အဖေတောင် သက်သာပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလေးမို့ အားလုံးကို ကုသိုလ်အဖြစ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ လေဖြတ်လူနာတောင် ၂ ပတ်အတွင်း လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့ မြန်မာ့ဆေးနည်းလေးဖြစ်ပယ်။အကြောညပ်၊ အဆစ်လွဲ၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနာကျင်မှုဟူသမျှအပြင် လေဖြတ်လူနာတောင် နှစ်ပတ်မကြာလမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တဲ့ အိမ်တွင်းဆေးနည်းလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်..ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ပဲဖြစ်စေ ၊ အကြော ညပ်လို့ပဲဖြစ်စေ ၊ အရိုးအကြောအဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲနာကျင်ခြင်းပဲဖြစ်စေခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းနာကျင်မှုဟူသမျှအတွက် အထူးကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တွင်းသုံးလိမ်းဆေးလေးပါ။ လေဖြတ်တာကိုသိတာနဲ့ အဲ့ဒီဆေးဖော်ပြီးလိမ်းပေးပါတယ်။နှစ်ပတ်မကြာဘူး။ လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ပြုစုဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ထိခိုက်ပြတ်ရှဒဏ်ရာတွေ သွေးထွက်လွန်ရင်လည်းဆေးရည်အနည်းငယ်လောင်းရုံနဲ့ သွေးတိတ်နိုင်ပါတယ်။ အိမ်တွင်းသုံး ဘက်စုံဆေး ဆေးကြီးပြုလုပ်ပုံကတော့…အရက်ဆီ ၊ဒီဇယ်ဆီ ၊နှမ်းဆီ ၊ရှောက်သီး….. အရည်ကိုညှစ်ယူရပါမယ်။အထက်ပါအရည်များကို ဆတူရောနှောပါ။ ရှောက်သီးမှာပါတဲ့ အခွံကအစ အစေ့အဆုံး … Read more